Gbasara Anyị - JITO Iburu
JITO Bearing bụ ụlọ ọrụ sayensị na teknụzụ nke na-egbochi nyocha na mmepe, na -emepụta ma na-azụ ahịa. Ọ bụ onye so na china agba ụlọ ọrụ mkpakọrịta, a ọchịchị unit nke hebei n'ógbè agba mkpakọrịta, a mba elu-tech enterprise. Onye isi njikwa Shizhen Wu bụ kọmitii na-anọchi anya na ọgbakọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ahụ maka ọchịchị guantao. Kemgbe e guzobere ya, etinyela ya n'ichepụta ogo dị elu na nkenke nkenke dị elu, yana ogo ogo P0 (Z1V1), P6 (Z2V2) na P5 (Z3V3). Aha a debara aha ya bụ JITO ma debanye aha na European Union. The ụlọ ọrụ nweela ISO9001: 2008 na IATF / 16949: 2016 usoro asambodo, nwere ọtụtụ R & D nchọpụta Kemịkalụ, na e ọdịda “hebei n'ógbè nkwekọrịta-akwanyere na n'aka-pụrụ ịdabere na enterprise” site hebei enterprise n'aka nkwalite mkpakọrịta na hebei n'ógbè enterprise Ebe E Si Nweta nnyocha Institute, na “hebei ógbè sayensị na teknụzụ SME” site hebei ógbè sayensị na teknụzụ ngalaba, wdg na nyere akwụkwọ. Emechara ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ wee tinye ya n'ọrụ na 2019, yana mpaghara ihe owuwu karịrị 10,000 square mita.
JITO ngwaahịa na-ọtụtụ-eji ụgbọala, gwongworo, injinịa ugbo ala, ugbo ígwè, na-eme akwụkwọ, ike-ọgbọ, Ngwuputa, nkà mmụta banyere ígwè, igwe ngwaọrụ, mmanụ ala na ụgbọ okporo ígwè wdg Iji nye mma ọrụ ahịa na-adị mfe maka ndị ahịa na- abịa na-atụle na-arụkọ ọrụ, anyị ụlọ ọrụ ike Liaocheng Jingnai Machinery Parts Co., Ltd na Liaocheng obodo, shandong n'ógbè. The okporo ụzọ bụ nnọọ adaba, naanị mkpa 1 hour na-abata n'ebe ọdịda anyanwụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Ji'nan na 1.5 awa na-abata na Jinan yaoqiang mba ọdụ. The ụlọ ọrụ nwere magburu onwe ahịa otu na R & D otu, na-eme ka JITO amị na-ama ika n'ọhịa.
Iji melite ewu ewu, ụlọ ọrụ anyị na-aga ọtụtụ ngosi gburugburu ụwa kwa afọ, anyị na-aga n'ihu isonye na nnọkọ ọ bụla nke shanghai mba na-agba ọkachamara ngosi, china mbubata na mbupụ commodities ngosi, Beijing mba ụgbọala ngosi, shanghai Frankfurt auto akụkụ ngosi wdg .
Anyị nwere kpamkpam mmepụta akara, ma na-mgbe niile nditịm akara ọ bụla usoro nke mmepụta, si akụrụngwa Ndinam, mbịne okpomọkụ ọgwụgwọ, si egweri ka nzukọ, si ihicha, oiling na mbukota wdg The ọrụ nke ọ bụla usoro bụ nnọọ nlezianya. Na usoro nke imepụta, site na nyocha onwe onye, ​​soro nyocha, nyocha nlele, nyocha zuru oke, dịka nyocha dị ka mma, ọ mere ka arụmọrụ niile ruo ọkwa mba ụwa. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ guzobere ụlọ ọrụ nyocha dị elu, webatara ngwá ọrụ nyocha kachasị elu, ogologo ihe atụ, spectrometer, profaịlụ, mita gburugburu, mita vibration, mita ike, ígwè nyocha ihe nyocha, ịmị ndụ ndụ na ihe ndị ọzọ eji atụ wdg. àgwà nke ngwaahịa ahụ na ikpe niile, arụmọrụ zuru oke nke ngwaahịa nyocha zuru oke, hụ na JITO iru ọkwa nke ngwaahịa ntụpọ！ Ngwaahịa anyị adabala na ọtụtụ ndị ahịa OEM na mba ọzọ na mba ofesi, ma buputa ya na European Union, South America, north america, South East Asia, Middle East, africa na obodo iri ato ndi ozo.
JITO na ogologo ndụ, oke nkenke na arụmọrụ dị elu meriri ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị, anyị ga-eme mgbalị na-aga n'ihu iji mepụta uru na akụnụba maka ndị ahịa. Nnọọ aka na ụlọ ọrụ JITO, iji mepụta echi mara mma！